iPhone 5s, mijery any ankoatr'izay. Vaovao IPhone
Apple dia manolotra ny iPhone mandroso indrindra hatreto, ny iPhone 5s. IPhone tena nohavaozina amin'ny haavon'ny fitaovana izay mahatonga azy ho iPhone tadiavin'ny mpankafy Apple rehetra. Izy ireo koa dia manolotra azy amin'ny loko nohavaozina ary tena mifanaraka amin'ny famolavolana ny sisin'ny fitaovana, tsy dia misy fahasamihafana intsony amin'ny sisa amin'ny fitaovana toy ny nitranga tamin'ny iPhone 4, ny loko dia mifamatotra tsara manerana ny fitaovana. Volontany volamena, volafotsy ary volondavenona.
Fa satria ny fiovana ara-batana amin'ny maodely dia tsy dia misy ifandraisany, Ny fanatsarana dia mifantoka amin'ny haavon'ny fitaovana, Ary ny tsara indrindra dia ny fomba nampidinin'izy ireo ny vidiny, noho izany dia ataon'izy ireo tsy misy isalasalana fa ny finday avo lenta tsara indrindra hatramin'izao.
Ny fanovana voalohany natolotr'izy ireo tamintsika ary angamba ny iray manandanja indrindra dia ny processeur vaovao A7 64-bit, ary tena tokony holazaina fa saika zava-baovao ity eo amin'ny tontolon'ny finday, farafaharatsiny iray amin'ireo fiasa ireo. Manana smartphone izay nolazain'izy ireo fa haingana hatramin'ny 40 heny noho ny iPhone tany am-boalohany, zavatra tena ilaina ao amin'ny haingana OpenGL ES sary natao ho an'ny. Tao amin'ny Keynote dia nanao fampisehoana ny lalao Infinity Blade III izy ireo ary ny marina dia manana sary mahafinaritra tsy mampino izy io.
Misy koa a microchip mihetsika vaovao, fantatra amin'ny anarana hoe M7, manome angona avy amin'ny accelerometer, gyroscope ary kompà, zavatra azon'ny mpandraharaha araraotina feno. Ny iray tamin'izy ireo, Nike, dia nandray ny lampihazo hanolotra rindranasa vaovao iray izay manararaotra an'ity data ity.
Mikasika ny fifandraisana, ny iPhone 5s dia manana antena Wifi 802.11a / b / g / n (802.11n, 2,4 ary 5 GHz) ary manana haitao tsy misy tariby Bluetooth 4.0.
Ny bateria araka ny lazain'izy ireo amintsika haharitra antsika hatramin'ny 10 ora miaraka amin'ny resadresaka ambanin'ny 3g, famerenana mozika 40 ora, ary hatramin'ny 250 ora fiandrasana.
Andao hiresaka momba ny fakantsary. Ary ny fakan-tsarimihetsika finday no tadiavintsika na tsia dia ny ho avy, ary efa tena zava-misy izy ireo, saingy marina fa ampiasaina amin'ny hetsika sary rehetra izy ireo, na dia ho an'ny sary natao ho fanjifana aza (tranga fantatra amin'ny hoe iPhonegraphy, na izay mifandraika rehetra miaraka amin'ny Instagram). Mpaka sary matihanina maro no nanatona an'ity tontolo ity mamorona sary mahafinaritra. Apple hatramin'ny fotoana voalohany dia nitondra fakan-tsarimihetsika lehibe ho an'ny iPhone ary noheverina ho iray amin'ireo fakantsary finday tsara indrindra io.
Izao raha vao jerena dia mitondra fakan-tsary misy optika somary lehibe kokoa izy io, ary LED taratra roa: ny iray fotsy ary ny andalana iray. Ilaina ity farany ka misy a fandanjalanjana loko rehefa maka sary ho azy ny sary. Eny, fakan-tsary mandeha ho azy, saingy fantatrao fa ny fakantsary dia tsy mahatonga ny mpaka sary ...
Manana ny fakantsary Singa 5 miaraka amina aperture F2.2 ambony indrindra. Nihatsara koa ny sensor, nahatratra a faritra mavitrika 15% lehibe kokoa noho ny efi-trano teo aloha iPhone 5. Mbola manana ianao 8 megapixels saingy mahavita mampihena ny tabataba izy ireo ary mampitombo ny fahazavana ara-batana.
Ny fakantsary iPhone 5s dia afaka hatramin'ny Sary 10 isan-tsegondra, ary amin'ny maody horonantsary slo-mo miaraka amin'ny frame 120 isan-tsegondra amin'ny HD. Fakan-tsary manitsy ny sary tsara ary mahatonga azy ireo hanana kalitao tsy mampino.
La Ny fakan-tsary anoloana koa dia nohatsaraina tamin'ny 1,2mpx, tena mifantoka rehefa mampiasa Facetime.
Ny zava-baovao lehibe hafa an'ny Apple dia ny bokotra vaovao Home nampiditra tao amin'ny iPhone 5s izy ireo. Bokotra nohavaozina izay mampiditra sensor ho an'ny dian-tànana, zavatra vaovao be hatreto. Antsoin'izy ireo izany Touch ID ary izy io dia ny fanoloana ny bokotra mahazatra izay niaraka tamin'ny iPhone nandritra io fotoana io, mitarika azy ireo hanana bokotra fikitika izay mampiditra ny mpamaky ny rantsan-tànana ihany koa.
Ny fampiasana azy? Eny, afaka miaraka aminy isika mamoha ny terminalary koa ampiasao izany raha mila fitakiana fiarovana, toy ny teny miafina ilaina amin'ny fividianana ao amin'ny App Store, na koa ny teny miafina izay ampiasaintsika isan'andro. Tsy tokony hatahotra isika toy ny ny dian-tànana dia voatahiry ao anatin'ny fitaovana, tsy hifandray amin'ny iCloud mihitsy izy io na ny developer app aza tsy ho afaka hanana izany. Ny sensor dia mamela antsika hitahiry dian-tanana maromaro raha toa ka te hizara fidirana amin'ny olona atokisantsika izahay, na te hanampy ny iray amin'ireo dian-tananay 9 sisa tavela.
Toy ny amin'ny iPhone 5c, Apple dia niverina tamin'ny raharaha raharaha ary nandefa maro izy ireo izay mahatonga azy io ho famenon-danja ilaina ho an'ireo izay tsy maniry ny hananan'ny findainy fahasimbana ivelany.
Ny iPhone 5s dia hanomboka hamidy amin'ny 20 septambra any Etazonia, Aostralia, Kanada, Sina, France, Alemana, Japan, Singapore, ary United Kingdom. amin'ny vidiny (miaraka amina fifanarahana 2 taona, ary ao an-tsaina hatrany fa vidin'ireo mpandraharaha amerikana izy ireo) $ 199 amin'ny kinova 16GB, $ 299 amin'ny kinova 32GB, ary $ 399 amin'ny kinova 64GB.
Any Espana dia hananantsika izany amin'ny fampielezana ny Noely ka amin'ity taona ity dia antenaina ho iray amin'ireo fanomezana kintana, sarotra ny mahita azy toy ny tamin'ny ririnina lasa teo niaraka tamin'ny iPad Mini. Mbola mitoetra ihany koa ny mahita ny vidin'ny varotra any Espana, ary koa ny fivadihan'izy ireo ho euro.
Araka ny doka dia $ 100 lafo kokoa noho ny kinova lowcost, iPhone 5cNoho io antony io, ny fahasamihafana dia kely dia kely, heveriko fa mendrika ny hisafidianana an'ity modely ity.
PS: Mahamenatra fa noho ny fivoahan'ny tsaho sy tsaho marobe dia tsy manambara fahagagana maro intsony izy ireo ao amin'ny Keynote's ...
Loharano - Apple
Fanazavana fanampiny - Apple dia manolotra ny iPhone 5s vaovao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPhone 5s, mijery lavitra
juanhack dia hoy izy:
Inona no nampidina ny vidiny? inona no nifokao na izany na tsy izany dia nitsangana izy ireo ary be loatra!
Mamaly an'i juanhack
Amin'ny vidin'ny US dia tsy ratsy ny vidiny na dia mifamatotra amin'ny orinasa iray aza ianao, any Espana dia azo antoka fa tsy toy izany, fa ny zava-drehetra sisa tazonina. Hotazoninay foana ny rantsan-tanantsika fa vidin'ny fifaninanana kokoa izy ireo. Na izany na tsy izany, ny vidin'ny lalao, heveriko fa tsy nisondrotra koa izy io, ny vidiny ambany "ambany" amin'ny 5c dia ratsy kokoa amiko raha ny fahitako azy.
Horonan-tsary: ​​izany no fomba fiasan'ny mpamaky rantsantanana iPhone 5S